SULFUR COLLOIDAL: CODSIGA BEERTA SI LOOGA ILAALIYO CAYAYAANKA - BEERTA
Sulfur Colloidal: tilmaamaha isticmaalka
Sulfur ayaa muddo dheer loo adeegsaday bani-aadmiga sidii qaab waxtar leh oo loola dagaallami karo cayayaanka kala duwan. Oo maanta, baaruud ayaa si firfircoon loo isticmaalaa beerta. Maanta, walaxkan waxa loo yaqaanaa koolo kooleeye ah waana budo la qasi karo ka hor inta aan la isticmaalin kadibna dhirta lagu daweeyo.
Waa maxay baaruudka kollofoolada iyo sidee ayay faa'iido u tahay beerta?
Cumulus (magac kale oo loogu talagalay walaxda la cayimay) waa kan ugu da'da weyn oo la caddeeyey in ka badan hal jaad waxaa loola jeedaa la dagaallanka cayayaanka iyo cudurrada fangas. Tani fangasasiga ka yimaada waxaa lagu soo saaraa qaababka warshadaha biyaha lagu kala firdhin karo, halkaas oo qiyaasta suntu ay tahay 80%.
Sulfur Colloidal ma aha mid aad u dabacsan dadka iyo xayawaanka, laakiin waxay u baahan tahay waafaqsanaanta tilmaamaha iyo xeerarka amniga. Waxtarnimada macneheedu waxay ku xiran tahay muddada daweynta ka dib markii loo qoondeeyey lammaanihiisa.
Saameynta daroogada ayaa si weyn u saameeya heerkulka hawada (+ 27 ... + 32 ºC). Haddii heerkulku hoos u dhaco + 20ºC, natiijadu waxay noqon doontaa mid aad u hooseeya. Haddii heerkulku ka sarreeyo + 35ºC, markaa waxaa jira halis waxyeello ah ee caleemaha geedka.
Heerkulka ugu sarreeya ee loogu talagalay isticmaalka nalalka kollofoolka ah ee dalagyada miraha iyo canabtu waa + 16 ... + 18ºC.
Waa muhiim! Maaddada la cayimay lama isticmaali karo xilliga abaarta iyo muddada kulul.
Ilaa dhowaan, si loo xakameeyo cayayaanka, cumulus waxaa loo isticmaalay in lagu kiciyo goobaha bakhaarada. Si kastaba ha ahaatee, daroogada casriga ah ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu riixday
Natiijada soo dhaweynta qalabka noocan oo kale ah wuxuu ku salaysan yahay heer sare oo gaasin ah. Daroogada uma baahna in ay gasho dhismaha warshadda si loo joojiyo horumarka iyo hab nololeedyada fangaska, iyada oo aaney u oggolaaneynin in ay ku dhufato oo horumariso. Daaweynta kaniiniga kolloidu wuxuu si gaar ah ugu shaqeyn karaa qolofka, xayrta maqaarka iyo dhoobada.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa walaxda la sharaxay waxaa loo isticmaalay sidii loogu diyaargaroobi lahaa beerta 40ka qarniyadood ee qarnigii labaatanaad, waxaa loo heley sidii wax soo saarka marka la nadiifiyo gaasaska ka yimaada sulfogen.
Shaki la'aan, baaruudda la soo sheegay waxay leedahay tiro faa'iido leh, taas oo u oggolaanaysa in ay sii wado jagada ka dhexeysa fungicides muddo dheer. Inkasta oo daroogooyinka badan ee casriga ah, isticmaalka walaxdan (gaar ahaan viticulture) waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
amniga iyo aan sunta ahayn ee dhirta;
lakabka ciidda ma aha mid sumaysan;
La-qabsashada laf-dhabarka kale iyo sunta cayayaanka;
waxtarka sare ee cudurrada faafa;
lama helin cimilada dabaysha;
xakamaynta qiyaasta fudud;
faa'iidada isticmaalka iyo qiimaha macquulka ah.
Ma taqaanaa? Sulfur waa mid ka mid ah qaybaha nafaqada ee dhirta iyo xaalado badan waxay kicisaa koritaanka iyo horumarinta dalagyada.
Diyaarinta xalka shaqada (cayrinta)
Ka hor inta aanad suuxin koloko sir ah, waa inaad xasuusataa in aadan ku dari karin daawooyinka kale.
Si aad u diyaariso xalka, biyaha ayaa si tartiib ah loogu daraa diyaarinta. Isla mar ahaantaana waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u kiciyaan xalka. Marka baaxada soo baxday ay noqotaa mid isku mid ah oo isku dheelitirnaantu waxay u egtahay mid ka-joojin ah, xalka waa diyaar.
Daawada ayaa la badiyaa isla markiiba ka hor isticmaalka, taas oo ah, iyadoo rajada ah in la qaato maalinta diyaarinta.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la isticmaalo suxuunta wax lagu karsado.
Qiyaasta isticmaalka maaddada kollofoolada, sida lagu sheegay tilmaamaha isticmaalka, waa 300 g halkii 100 m². Waxaad qaban kartaa wax ka badan 5 jeer xilli ciyaareed kasta. Intaa waxaa dheer, daaweynta ugu dambeysa waa in la fuliyaa ugu dambeyn saddex maalmood ka hor goosashada. Miro la soo ururiyey waa in si fiican loo dhaqo biyo.
Si loola dagaallamo wax-qabsiga budada, miraha miraha waxaa lagu shaqeeyaa saddex jeer:
Ka dib (ama dhammaadka) ubax.
Marka aan ka yareyn 75% tufaaxa ayaa dhacaya.
2 asbuuc ka dib daaweynta labaad.
Dhirta miraha, miraha qurxinta iyo khudradda leh xalka lafaha kolloidada waxaa lagu daaweeyaa calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka cudurka iyo 10-12 maalmood, ilaa ay ka dhammaato.
Laga soo bilaabo keel, dhirta kaymo si dhakhso ah loo daaweeyo geedo beerto.
Macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan fungicides kale: "Fundazol", "Fitosporin-M", "Kvadris", "Hom", "Skor", "Alirin B", "Topaz", "Strobe", "Abiga-Pik".
Wax-qabadka waxaa lagu sameeyaa adigoo isticmaalaya qalab gaar ah ama adigoo isticmaalaya faashad (3-4 lakab). Qoyntu waxay ka baxdaa daroogada waa inay noqotaa labis. Waa lagama maarmaan in la buufiyo waraaqaha ka yimaada dhammaan dhinacyada, iyadoo la eegayo xaqiiqda ah in walaxda la soo sheegay aysan awoodin inay ku ururaan dhirta. Horumarinta dalagyada waa in lagu sameeyaa qallalan, cimilo degan.
Qiimaha isticmaalka kumburka kollofoolka ee dalagyada beerta iyo beerta (oo ay ku jiraan tufaax iyo pear) ayaa lagu muujiyey miiska:
Dhaqanka Cayayaanka Xaddiga daroogada, garaam 10 litir oo biyo ah Tirada daaweynta
Canab Oidiyada 30-60 4-6
Currant black Macmacaanka macaanka 20-30 1-3
Tamaandho Alternaria, caarada budada ah, macrosporioz 20-30 1-4
Roses Macmacaanka macaanka 20-30 2-4
Kaabashka Kila, lugta madow 50 1
Khajaarka Macmacaanka macaanka 20 (dhulka banaan) 40 (dhulka cagaaran) 1-3
Qooble, qaraha Anthracnose, caarada budada ah, askohitoz 30-40 1-3
Gooseberry Macmacaanka macaanka 20-30 1-6
Beetroot Macmacaanka macaanka 40 1-3
Geedo miraha ah Kabuubyo, xayrta maqaarka, dhoobada 30-80 1-6
Maple Macmacaanka macaanka 30-40 5
Dalagyada ubaxa Macmacaanka macaanka, anthracnose, askohitoz 20-30 2-5
Dalagyada daawooyinka Macmacaanka macaanka 100 1-2
Ma taqaanaa? Sulfur wuxuu ku faafaa fungus, wuxuu ku burburiyaa unugyada, wuxuuna isku daraa hydrogen, si tartiib tartiib ah u ogaanaya oksijiinka. Iyada oo la xakameynayo hawlaha neefsiga ee unugyada falalkeeda, waxay burburinaysaa fungus.
Markaad isticmaasho kumbir kolloid ah oo kudub dhexaad ah, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo wakiilada ilaalinta:
neef-qabatin ama faashad suuf ah;
Inta lagu jiro nidaamka waxaa si adag loo mamnuucay in la cabo, sigaar cabo oo wax cuno. Daaweynta ka dib, ku dhaq gacmahaaga si saabuun leh oo biyo ku nadiifi afkaaga.
Maadaama maaddadani ay ku jirto fasalka saddexaad ee khatarta ah, weelasha ay ku jiraan xal, iyo baakidhka laga soo qaato daroogada, baaruudda kolloidu waa in lagu aasaa meel ka baxsan xaafadda. Ha ku shubin nidaamka tuubada bulaacada ama ha ku tuurin qashinka guryaha.
Macluumaad xiiso leh oo ku saabsan Bacriminta: potassium sulfate, succinic acid, Bacriminta nitrogen, humate potassium, dhuxusha, amooniyam amooniyam.
Gargaarka koowaad ee sumowga
Sidii hore loo soo sheegay, khatarta ah baaruudda bani-aadmiga ee aadanuhu maaha mid aad muhiim u ah. Si kastaba ha noqotee, haddii walaxku uu taabto maqaarka, dermatitis ayaa dhici karta, iyo neefsashadeeda uumigu wuxuu keenaa boronitis.
Sidaa daraadeed, marka ay taabato maqaarka, waxaa lagama maarmaan ah in meesha laga saaro faddaraynta suufka iyo si degan u dhaq biyo iyo saabuun, iyo haddii ay taabato taabashada mukosa, waa inaad ku dhaqdaa biyo badan. Haddii qofku neefsado qiiqa, wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo nabada iyo inuu siiyo hawo cusub. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ka dibna samee nuugid macmal ah.
Xaaladda qaadashada maalgalinta, waxaa lagama maarmaan ah in la cabbo kaarboonka firfircoon (oo ah heerka 1 g halkii kiilo oo miisaanka bani'aadamka ah) iyo qadar badan oo biyo ah. Waxaad qaadan kartaa calool jilciye.
Xaalad waliba, marka sumeeyaha cumulus uu ka fiican yahay inuu la tasho dhakhtar.
Shuruudaha iyo xaaladaha kaydinta
Sulfur Colloidal waa in si gooni ah loogu kaydiyaa alaabta iyo daawooyinka meel qabow oo aan la gaari karin carruurta iyo xayawaanka.
Daroogadu waxay haysaa guryaha muddo labo sano ah heerkulkoodu ka -30ºC ilaa + 30ºC.
Waa muhiim! Maadaama ay baaruuddu tahay wax guban kara, waa inaysan kululayn.
Guud ahaan, inkastoo tartanka weyn, walaxda la sharraxay xaqiiqo ahaan waxay u baahantahay waxtarkeeda, awooddeeda iyo sahlanaanta isticmaalka.